News - ဓာတုအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့်တရုတ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုင်ရာ ၂၂ ကြိမ်မြောက်အမျိုးသားညီလာခံ
(၂၀) ကြိမ်မြောက်ဓာတုအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံကိုတရုတ်ဓာတုလူ့အဖွဲ့အစည်းအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၅) မှ (၁၇) ရက်အထိရှန်စီပြည်နယ်၊ တိုင်ယွမ်မြို့၌ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ဤကွန်ဖရင့်ကိုတရုတ်ဓာတုဗေဒအသင်းမှကမကထပြုပြီး၊ တရုတ်ဓာတုလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် Taiyuan တက္ကသိုလ်နှင့်ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာရှန်စီတက္ကသိုလ်၏အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့်အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ ဤကွန်ဖရင့်၏အဓိကခေါင်းစဉ်မှာဓာတုအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့်အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုင်ရာဘက်ပေါင်းစုံပါ ၀ င်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်သည်။ အဆိုပါညီလာခံဓာတုအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့်အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏နယ်ပယ်များတွင်အခြေခံ, applications များနှင့်နယ်စပ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, ဖြေရှင်းချက်ဓာတုဗေဒ, အပူဓာတုဗေဒ, အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စာရင်းအင်းအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့်ကွန်ပျူတာခြင်း simulation နှင့်၎င်းတို့၏ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ, ပစ္စည်းများ, ဘဝ, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စွမ်းအင်သိပ္ပံ။ ပြIssနာများ၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်အတွင်းရရှိခဲ့သောနောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနတိုးတက်မှုနှင့်ရလဒ်များကိုအပြည့်အ ၀ ပြသနိုင်ခြင်း၊ အခွင့်အလမ်းများ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဓာတုအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့်အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနယ်ပယ်တွင်အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များကိုအသေးစိတ်လေ့လာခြင်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစွမ်းရည်နှင့်စည်းကမ်း၏ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးကိုထပ်မံမြှင့်တင်ရန်။
ကွန်ဖရင့်၏ဆက်သွယ်ရေးပုံစံတွင်ညီလာခံအစီရင်ခံစာ၊ ဌာနခွဲဖိတ်ကြားမှုအစီရင်ခံစာ၊ နှုတ်တိုက်အစီရင်ခံစာ၊ လူငယ်ဖိုရမ်နှင့်ပိုစတာတင်ဆက်မှုတို့ပါ ၀ င်သည်။ အဆိုပါညီလာခံကလူငယ်ဖိုရမ်ဆုနှင့်ထူးချွန်သောပိုစတာများကိုချီးမြှင့်သည်။ ကွန်ဖရင့်အတွင်းမှာဓာတုအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်၊ အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ဆက်စပ်တဲ့သုတေသနပြုမှုမှာပါ ၀ င်တဲ့လူသိများတဲ့ကျွမ်းကျင်သူနှင့်ပညာရှင်များကိုကွန်ဖရင့်အစီရင်ခံစာပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားပါလိမ့်မယ်။ စည်းကမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆွေးနွေးရန်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိဓာတုအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့်အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုင်ရာနောက်ဆုံးပေါ်ကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများကိုပြသမည်ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာလုပ်သားများနှင့်လူငယ်ကျောင်းသားများသည်စာတမ်းများဖြည့်တင်းရန်နှင့်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
အစည်းအဝေးအချိန်: ဇူလိုင်လ 15-17, 2020
နေရာ - ရှမ်းစီပြည်နယ်၊ တိုင်ယွန်းမြို့
အဓိကစီစဉ်သူ - တရုတ်ဓာတုလူ့အဖွဲ့အစည်း
ပံ့ပိုးသူ - ၁။ ဓာတုအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့်အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကော်မတီ၊ တရုတ်ဓာတုလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ၂။ တိုင်ယမ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ၃။ ရှန်ဇီရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာတက္ကသိုလ်
ညီလာခံဆောင်ပုဒ်: ဓာတုအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့်အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ဘက်ပေါင်းစုံပါ ၀ င်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှု
ညီလာခံဥက္ကChairman္ဌ Wang Jianji
ခန့်မှန်းအရွယ် - ၆၀၀ ဦး
ကွန်ဖရင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ် http://www.chemsoc.org.cn/meeting/CTTA/
ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - Cui Zixiang
လိပ္စာ: 030024, ရှန်စီပြည်နယ်, Taiyuan City, Yingzexi လမ်း, 79 #
ဆွေးနွေးပွဲ၏မာတိကာ - အလားအလာရှိသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေ၊ နယ်နိမိတ်နှင့်စည်းကမ်း၏အလားအလာများ၊ စနစ်တကျသုတေသနရလဒ်များ; မူရင်းသုတေသနလုပ်ငန်း။ 1. ဖြေရှင်းချက်ဓာတုဗေဒ; 2. Thermochemistry; 3. အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်၎င်း၏လျှောက်လွှာ; 4. ပစ္စည်းအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်; 5. Biothermodynamics; 6. Interface ကိုနှင့် colloid အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်; ၇ ။ ၈ ။ ၉ ။ ၁၀။ တူရိယာများနှင့်နည်းလမ်းများ၊ 11. ဆက်စပ် Cross- ဖြတ်တောက်လယ်ကွင်း